मकै खाँदा के हुन्छ?
Home विचार मकै खाँदा के हुन्छ?
मकै हामीले खाँदै आएको खाद्यान्न हो। गाउँघरदेखि शहरबजारसम्म लोकप्रिय बनेको मकैलाई कहीँ कहीँ वेवास्ता गरिएको पनि पाइन्छ।
मकै खाइरहेको भएपनि यसका फाइदाहरुका बारेमा धेरै जसोलाई थाहा नहुन सक्छ। मकै भरपुर पौष्टिक तत्व भएको र स्वास्थ्यका लागि अति नै फाइदाकारी खाद्यान्न हो।
मकैले हाम्रो कपाल र छालालाई पनि धेरै फाईदा पुर्‍याउँछ।
मकैमा विशेषगरी भिटामिन, खनिज र फाइबर पाइन्छ। यसका केही विशेष फाइदाहरु यसप्रकार रहेका छन्।
रक्त अल्पताबाट जोगाउँछः
भिटामिन बी १२ र फोलिक एसिडका कमीले रक्त अल्पता हुने गर्दछ। मकैमा यी तत्वहरु पाइने हुनाले रक्त अल्पताको खतराबाट जोगीन सकिन्छ।
मकैलाई पोषणयुक्त खाद्यान्न मानिन्छ। यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ जसले शरिरलाई आवश्यक पर्ने तागत प्रदान गर्छ।
कोलस्ट्रोल कम गर्छः
कलेजोले उत्पादन गर्ने कोलस्ट्रोल मुख्यतया २ प्रकारका हुन्छन्, एचडीएल (राम्रो) र एलडीएल (नराम्रो)। चिल्लो खानाले नराम्रो (एलडीएल) कोलस्ट्रोल बढ्छ, जसले मुटु कमजोर बनाउँछ र मुटु सम्बन्धी रोगको खतरा हुन्छ। मिठो मकै भिटामिन सी ले भरिपूर्ण हुन्छ, यसले कोलस्ट्रोलको मात्रा बढ्नबाट रोक्छ।
तौल बढाउन सहयोग गर्छः
आफ्नो तौल बढाउन चाहनेहरुका लागि मकै फाइदाजनक हुन्छ। एक कप मकैको गुदीले १३० क्यालोरी प्रदान गर्छ। खानामा पाइने थुप्रै पोष्टिक तत्वहरु मकैमा पाइन्छन्। मकैलाई आफ्नो आहारमा दैनिक खानाले तौल बढाउन सकिन्छ।
मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट जोगाउँछः
दैनिक मकैको गुदी खानाले मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्याबाट टाढा रहन सकिन्छ। मकैका रहेका फाइटोकेमिकलले शरिरमा इन्सुलिनको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ। यसका साथै मकैमा पेन्टोथेनिक एसिड पनि पाइन्छ। यसका साथै भिटामिन बी ले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र लिपीड मेटाबोलिजममा पनि मदत गर्छ जसले एड्रिन ग्रन्थिहरुमा हुने दबाव कम गर्छ।
कनेक्टिभ टिस्यूलाई बलियो बनाउँछः
कनेक्टिभ टिस्यूमा हाड, लिगामेन्स्, टेन्डन्स्, मसल्स र कार्टिलेज पर्छन्। मकैमा ट्रेस मिनिरल म्यागनिज पाइन्छ जसले कनेक्टिभ टिस्यूलाई बलियो बनाउँछ। यसका साथै म्यागनिजले रगतमा चिनीको मात्रालाई स्थिर राख्छ र बोसोलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। हाडको लागि चाहिने म्यागनेसियम, कपर र फस्फोरस जस्ता तत्व पनि मकैमा पाइन्छन्।
मकैको पहेँलो गुदीमा क्यारोटेनोइडस् नामक तत्व पाइन्छ जसले म्याकुलर डिजेनेरेसनको खतरा (दृष्टिमा हुने कमी) लाई कम गर्छ।
क्यान्सरसँग लड्ने क्षमताः
मकैमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। यसका साथै यसमा फिलोनीक कम्पाउन्ड, फेरुलीक एसिड प्रसस्त मात्रामा पाइन्छन् जसले स्तान क्यान्सर र कलेजोमा हुने रोगहरुलाई टाढा राख्छ।
गर्भावस्थाको लागि फाइदाजनकः
मकैमा फोलिक एसिड पाइने भएकाले यो गर्भवती महिलाहरुका लागि फलदायी हुन्छ। फोलिक एसिडका कमीले कम तैल भएका र नसा सम्बन्धी समस्या भएका बच्चाहरु जन्मिन सक्ने खतरा हुन्छ। यस्तो समस्या हुन नदिन गर्भवती महिलाहरुले आफ्नो आहारमा मकै पनि खानु पर्दछ। उच्च रक्तचाप र हातखुट्टा सुन्निएको अवस्थामा भने डाक्टरको सल्लाह लिनु पर्दछ।
नोटः मकै शरिरको अवस्था र पाचन प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर र मात्रा मिलाएर मात्र खानुपर्छ।
Previous articleमकै खेतीमा किसानको आकर्षण
Next articleप्लाष्टिक घर (टनेल) भित्र तरकारी खेती